Abenzi basechina i-CY-6 (iAluminiyam yaphezulu) kunye nabathengisi | Jialong
Esikusukelayo ayisiyiyo indawo yokuhlala kuphela, sifuna uhlobo lwesimo sokuphila, simahla kwaye silula.
umbala I-rose yegolide, uthuthu lwentsimbi, isilivere yomkhenkce
ukwakheka kwezinto ingxubevange yealuminium
injongo Ukugcinwa kweewadi, ukomisa ibhalkhoni
umsebenzi Skid Anti, akukho mkhondo, akukho ebunayo, umhlwa anti
Izinto ze-1, i-Aluminium izinto ezinobunzima bokukhanya kunye namandla aphezulu zisetyenziselwa ukwenza icandelo elinqamlezileyo lodonga olunqamlezileyo, olulungele ukusebenzisa kunye nokunciphisa ubunzima. Icandelo elinqamlezileyo linamandla okugoba okuphezulu, ke indawo yokuhlala eyenziwe kuyo yomelele kwaye ine-deformation encinci.
2). Uyilo olulula, ukubonakala okuhle, imeko egudileyo, ukubumba okukodwa, uyilo lwe-ergonomic, ukulungelelanisa ngakumbi iimpahla, akukho mikhondo yokomisa igxalaba, isenza iimpahla zisempilweni ngakumbi.
I-3) Isakhiwo soxande soomatshini, ukuthwala imithwalo eyomeleleyo, igxalaba elandisiweyo kunye nelityebileyo, ethwele ukugqwesa, inentliziyo eyomeleleyo, imithwalo emininzi inokuthwala.
4) Ukuqiniswa kwesikhonkwane esomeleleyo, ukubethelelwa kwesandla, ukuhlala ixesha elide kwaye kuqinile, kunokusetyenziselwa ubomi bonke.
Idityaniswe netekhnoloji yobuTshayina neyaseNtshona yokujonga ubugcisa, jolisa kuyilo lwanamhlanje lokumisa ubomi, ukukhanya okuqaqambileyo ngaphandle komxholo woyilo oluphezulu.
Injongo yantlandlolo yoyilo lwe-H-uhlobo lwee-rack yeyokwakha indawo yokuhlala usapho. Xa kuthelekiswa nezinye iirock zempahla, inendawo eyomayo ngakumbi, uzinzo ngakumbi, kwaye akukho lula ukubethwa ngumoya.
I-Aviation grade aluminium alloy, inkqubo yokusika yanamhlanje, ukubonakala okuhle ngakumbi, ekhaya kukwindawo entle.
Sineziqwenga ezingama-450 kwimeko nganye. Umyalelo omncinci yimeko enye.
Imveliso yethu ye-aluminium yokubeka iimpahla kwimveliso yokuvelisa, ukuze kuqinisekiswe umgangatho, sinomntu okhethekileyo ukulawula onke amanqanaba. Wonke umatshini ugadwe ukuqinisekisa umgangatho wayo yonke imveliso.
Egqithileyo CY-7 (Aluminium kwendawo yokuhlala)
Okulandelayo: I-CY-5 (okrelekrele weempahla zombane)
Aluminium ingxubevange Ukuqwayita leposi
Iimpahla zeAluminiyam zokumisa iRack
Aluminium Dish Ukuqwayita leposi
Aluminium Ukuqwayita leposi
Yangaphandle Aluminium Ukuqwayita leposi
Isithuba seAluminiyam yasekhaya yokuMisa iRack